Waxaan ku xidhn nahay halkan: Gargaarka Musiibada ee Waqooyiga Dooxada - Gargaarka Musiibada ee Mataanaha
Waxaan ku Xidhnayn Halkan: Gargaarka Mutadawrka Waqooyiga
Home/updates/Waxaan ku Xidhnayn Halkan: Gargaarka Mutadawrka Waqooyiga
Waxyaabaha soo socdaa waa warbixin ka soo socota Gargaarka Labaad ee Waqooyiga Dooxada koox, kuwaas oo abaabulaya jawaab iskeed iskeed u taagan oo ah Xarunta Fire Fire ee ka socota Chico, CA:
Waxaan nahay Waqooyiga Dooxada Mutual Aid (NVMA). Sidaad u badan tahay inaad maqashay, Camp Fire oo bilaabay Noofembar 8th waa dabka ugu dhimashada iyo khasaaraha badan taariikhda taariikhda California. Waxa kale oo ay tahay inaad fahamto waa sida ay ugu xidhan yihiin dadka reer woqooyi dooxada, iyo saamaynta musiibada ay ku yeelanayso qof walba oo halkan jooga.
Waxaa jira dadaalo badan oo samafal laakiin kuwayaga ayaa ka duwan. Waxaan ku shaqeyneynaa dhowr qiimeyaal oo lagu qeexay shabakad qaran oo loo yaqaan Mutual Aid Musiibo Relief (MADR). Waxa muhiimka ah in la ogaado waa inaan halkan ku xidhnay, oo aan dhamaanteen iskaa wax u qabso ku nahay, waxaan bixinnaa isku duubnaan intii aan ku bixin lahayn tabaruc, kooxdeena waxay raadineysaa inay dumiso hannaankii ugu sareeyay ee deeq bixiyaasha iyo kuwa kaalmeeya dadka aan dhamaadka lahayn - waxaan aqoonsan nahay xuquuqda waarayaasha musiibada. si loo go'aamiyo waxay u baahan yihiin iyo sida ugu wanaagsan ee kuwa kale u caawin karaan. Waxaan xooga saareynaa baahida shucuurta iyo jir ahaaneed ee waarayaasha. Hada waxaan haysanaa lix koox shaqo iyo shabakad dabacsan oo ka kooban xubnaha bulshada ee 100 oo kaqeyb galaya — laakiin tiradan ayaa sii kordheysa maalin walba.
Muhiimadeena degdega ah waa inaan taageerno dhibbanayaashii 'Fire Fire' laakiin waxaan garwaaqsan nahay in fikradaheena, tamarkeenna, ilahayada, iyo qiimayaashayada abaabulka ay wali ahaan doonaan kuwo loo baahan yahay wadada iyo dhinacyo badan. Annaga oo la shaqeyna, dhageysanayna, oo taageeraya bulshooyinka saameynta ku yeeshay si ay u hoggaamiyaan dib u soo kabashadooda, gaar ahaan xubnahooda ugu nugul, waxaan dhisnaa bulsho muddo dheer, waarta, iyo adkeysiga. Magaalada Jannada iyo bulshada ku xeeran guud ahaanba waa dakhligoodu hooseeyo, oo ay ku badan yihiin dadka waayeelka ah. Waxaan taageeri doonnaa xubnaha bulshada ee wajihi doona dabeyl qallafsan dadaalkooda si ay noloshooda dib ugu dhisaan xafiisyada, horumarayaasha, iyo hay'adaha sida FEMA.
Maaddaama ay musiiboani tahay mid deg deg ah, waxaan dhulka u joognaa inaan dhageysanno codadka bulshada saameynta ku yeeshay si aan u fahamno halka ugu wanaagsan ee aan adeegga ugu adeegi karno.
MAXAAN KA HADLAY
Waxaan bilownay abaabulista qiyamka iyo mabaadii'da asaasiga ah ee ay diyaarisay Mutual Aid Disaster Relief (MADR). Waxaan qabannaa shirar kooxeed furan kaasoo sababay in dhowr koox shaqo oo halkan maalin kastaa wax ka qabtaan. Kooxahan waxaa ka mid ah xarun dhexe / abaabulid, kaalmo shucuureed iyo mid jir ahaaneed, nadiifin iyo dib-u-dhis, marin-u-helidda xafiisyada, daryeelka carruurta, sahayda iyo qaybinta, iyo wacyigelinta iyo warbaahinta. Kooxahani waa kuwo deg deg ah oo dheecaanno ah oo ay ku midoobi karaan, beddeli karaan ama kala diri karaan markii ay dhacdooyinku soo ifbaxaan, kooxo cusubna way soo bixi karaan markii loo baahdo.
Toddobaadkii ugu horreeyay waxaa lagu qaatay in lala xiriiro dadkaas si toos ah u saameeyey dabku, gaar ahaan kuwa aan haysan meelaha ugu yar. Tan waxaa ka mid ah helitaanka ilaha tabarucaadka iyo sahayda iyo ku habboonaanta baahiyaha. Waxaan bilownay inaan u qaybinno waji-xidhka, dharka, teendhooyinka, cuntada iyo waxyaabaha kale ee daruuriga u ah dadka waxtarka u baahan, badiyaa agagaarka xeroyinka ay bilaabeen inay ka soo baxaan agagaarka Chico.
Waxaan sameynay daawo geedo, cunno iyo shaah oo waan qeybinay. Waxaan ku tababaranay dhagaysi qoto dheer dadka u baahan inay la hadlaan waxaanan siinay taageero niyadeed markii la weydiisto.
Waxaan ku sugnay meel go'an oo leh jikada ganacsiga waxaanna bilownay jikada cuntada ee aan ahayn Bakhaarka cuntada oo aruurisa cuntada, karinta, iyo qaybinta cuntada maalin kasta. Booska waxaa sidoo kale loo isticmaalay sidii kaydinta sahayda iyo agabyada.
Waxaan bilownay inaan waalidiinta siinno daryeelka carruurta iyo daryeelayaasha.
Waxaan bilownay aruurinta iyo qeybinta macluumaadka ku saabsan ilaha iyo sida aan ugu soconno nidaamka-sharci-darrada ee ay wajaheyso kaalmooyinka hay'adaha iyo hay'adaha aan dawliga ahayn iyo kuwa aan dawliga ahayn.
Waxaan sidoo kale u kala saarinayn 'barakaca' iyo 'hoy la'aan' dadka. Waxaa jiray kalasooc badan oo loogasoo horjeedo kuwa loo arko inay hoy la'aan muddo dheer jirtay iyadoo la diidey caawinaad.
WAA INAAN SAMAYNO HADAAN
Magaalada Jannada iyo aagagga kale ee ay dhibaatadu saameysey waxaa xanibay Ilaalada Qaranka iyo xoojinta sharciga, si wax ku ool ahna u ilaaliya qof walba. Mulkiileyaasha guryaha ayaa loo qabtay iyagoo isku dayaya inay ku soo noqdaan magaalada si ay u arkaan burburka naftooda. Tani waxay ka dhigan tahay in wixii nadiifin iyo dib-u-dhis ahba ay u eg tahay inay wali usbuuc ka maqnaanayaan, sidaa darteed dadaalkeenna wuxuu kusii jeedaa diirada saaran dadka u soo qaxay aagga Chico iyo sida aan u taageerno, inta qorshaynaysa nadiifinta mustaqbalka iyo dadaallada dib-u-dhiska.
Saadaasha waxaan ku haynaa roobab iyo duufaano taasna waxaa suuragal ah inay abuurto dhibaatooyin cusub oo ku saabsan dadaalkeena gurmadka.
Waxaan sii wadeynaa inaan taageerno dadka wax dooranaya ee joogaya xeryaha in kastoo ay sii kordhayaan culeysyada kaga imanaya xoogagga dibedda inay baxaan iyo Kheyraadka laga qaado. Waxaan aaminsanahay xaqa qofkasta u leeyahay inuu go'aannadan gaaro naftooda. Waxaa jira sababo badan oo sababta uusan qofku u dooneyn in lagu meeleeyo xaalad hoy, gaar ahaan marka ikhtiyaarkooda keliya ee waqtigan ay u muuqato in laga saaray bulshada dhexdeeda.
Degsiimada Walmart waxaan ka caawineynay adkaynta teendhooyin leh sharooto iyo gogosha waxaanan sameysannay teendho NVMA oo leh macluumaad iyo ilo. Waxaan sidoo kale ilaalinay fiidkii habeennimo si aan isha ugu hayno booliska iyo joogitaanka 'amniga' waxaanan sameynay shabakad jawaab degdeg ah si aan u abaabulno kiisaska ka saarista khasabka ah.
Wacyigelinta, cuntada, samaynta dawada, daryeelka ilmaha iyo taageerada niyadda ayaa socota.
Waxaan lashaqeyneynaa qeybaha deegaanka si aan gacan uga geysano dhisida qeybaha ugu nugul ee biyo mareenada iyo qulqulka ka hor duufaanka kaasoo abuuri kara dhul gariir iyo nabaad guur.
Kooxaha shaqada iyo shaqsiyaadku waxay maalin walba wacyigelinayaan oo ay kulmaan si ay u qiimeeyaan ugana wada hadlaan baahiyaha bulshada iyagoo isha ku haya xaaladda degdegga ah iyo mustaqbalka fog. Musiibadaani weligeed waxay beddeli doontaa beesheena weligeedna waxaan u baahan nahay cod aan ku qaabeyno waxa isbeddelkaas u ekaan doono.
Waxaan ka shaqeyneynaa sidii aan awood ugu yeelan laheyn fududeynta tabaruceyaasha ka dhaca bannaanka iyo ururada doonaya in laga caawiyo mashruuca Mutual Aid oo aan kor u qaadno heerka aan awoodno inaan wada qabanno.
SIDA AAD KA HELI KARTAA
Waxaan uruurineynaa tabarucayo annaga Bogga GoFundMe.
Waxaad kaloo gacan ka geysan kartaa sare u qaadistayada Liiska rajistaha ee Amazon. (Fadlan hubso in cinwaanka 'North Valley Mutual Aid' ee ku yaal Chico loo xushay gudbinta markay tahay goortaas!)
Haddiise aad raadineysid inaad shaqsi ahaan iskaa wax u qabso ku shaqeyso, waxaan kaa codsaneynaa inaad marka hore aqriso bayaanka hadafkayaga (hoosta) iyo qiyamkeena asaasiga ah. Waxaan sidoo kale kaa codsaneynaa fahankaaga in aan dhisneyno ururkan isagoo ka bilaabaya xoq, sidaas darteedna kheyraadkeenna iyo awooddeena ayaa wali ku socota si xawli ah, laakiin waxaan ku baraneynaa oo aan si dhakhso leh u koraynaa! Qaar ka mid ah Mashaariicda lagu rakibi karo waxaa ka mid noqon kara wacyigelin, gargaar deg deg ah oo xagga shucuurta ah, Cunnada Aan Qarxin, mashaariicda dhismaha, gaadiidka, warbaahinta, iyo waxyaabo kaloo badan (oo marwalbana waxaan u furan nahay fikradahaaga weyn!).
Sidookale fadlan ogow in masiibadaani ay tahay mid deg deg ah oo socota, ballanteena halkaan aan ku suganahay mustaqbalka fog. Sida waxyaabaha dhulka ka jira isbedelaan, baahida caawinaaduna sidoo kale way is beddeli doontaa. Waxaan u baahan doonaa taageero iyo isku xirnaan xagga khadka.
Taasi waxay tidhi, waxaan u isticmaali karnaa caawintaada! Haddii aad jeceshahay inaad timaadid Chico oo aad iskaa wax u qabso kula shaqayso NVMA fadlan nala socodsii waxyaabaha soo socda adiga oo noogu soo hagaajinaya cinwaanka e-mayl [Email ilaaliyo]:
Miyaad qabtaa cudurka loo yaqaan 'VEHICLE'? WAA NOOCEE?
Miyaad u baahan tahay meel aad ku nooshiineyso?
Mudo intee leeg ayaad sii joogi kartaa?
WAA MAXAY Taariikhda?
FARSAMADA KHATARKA AH AMA FUUQAADA INAAD FURATO
MAR KASTA OO AAD KA FILAN TAHAY INAAD U SAMEEYSAA DALKA?
SU'AALAHA HADDII UU UGU JIRO?
Bayaanka howlgalka iyo qiimaha muhiimka ah waxay ku saleysan yihiin abaabulka wadajirka ah ee ay sameynayaan Gargaarka Musiibada Musiibo.
Ujeeddada NORTH VALLEY MUTUAL AID waa in la bixiyo gargaarka musiibada iyadoo lagu saleynayo mabaadi'da midnimada, gargaarka iskaashiga ah, iyo waxqabadka tooska ah ee madaxbannaan. Adoo la shaqeynaya, dhageysanaya, iyo taageerida bulshooyinka saameynta ku yeeshay, gaar ahaan xubnahooda ugu nugul, si ay u hoggaamiyaan dib u soo kabashadooda, waxaan dhisi doonnaa bulshooyin waara, waara oo u adkeysta.
NORTH VALLEY MUTUAL AID wuxuu rajaynayaa xoog, firfircoon, adkeysi, isku xirnaan, iyo awood shaqsiyaad iyo bulshooyin taasoo qayb ka ah bulshada rayidka ah oo soo kicineysa rajada ka dib qalalaasaha, kana weecin doonta ka hortagga raasamaalka masiibada iyo fowdada cimilada, iyadoo la door bidaayo nabad badan, caddaalad, iyo adduun waara. Haddii masiibada mustaqbalka ay noqdaan qodobo xaddidan oo awood u leh inay xakameeyaan siyaasadaha taageeraya mudnaantooda iyo siyaasad, bulsheed, iyo xakameyn dhaqaale ama inay noqdaan fursado lagu dhiso awood dheeraad ah iyo adkeysiga shakhsiyaadka iyo bulshooyinka sii xoojinaya dhaqdhaqaaqyadeena isbedelka bulsho ee xag jirka ah annaga ayaa iska leh. iyo xulashooyinka aan sameyno.
Kobcinta Xididdada Biyo-Weyn ee Gargaarka Mutual: liistada fikradaha, dhiirrigelinta, iyo kheyraadka
(Re) Dhisida Mustaqbalka: Midnimada Sollarity ee Puerto Rico
Ruug cadaa xoog badan
Dad badan oo dhiirigelinaaya mashaariicda gargaarka wadajirka ah iyo